Ịzụta Pregnyl na Thailand - anabolic steroid hormone na Bangkok
Ọhụrụ! Genotropin - Ndebanye aha ọnwa
Ntufe Bank Banyere Ego
Bitcoins (10% ego)
Ịga na Thailand
Vidio bara uru banyere HGH
Olee otú ị ga-esi zere ịghọ aghụghọ a merụrụ ahụ?
Ozi ezigara n'efu & ịkwụ ụgwọ ego | Awa: 9: 00 am - 8: 00 pm | Kpọọ & WhatsApp, Ekwentị, Viber, 66 61 686 66 55 +
Ịgachi price 3,000.00 ฿ Sale
Akpanwu aha - Wepụ
Pregnyl 5000 IUpowder maka ngwọta maka ogwu.
Tinyere usoro a
Ihe na-akpata ọgwụ pharmacologic:
Ihe na-arụsi ọrụ ike bụ rotting bụ gonadotropin choro mmadụ,
Nke a na - enweta site na mmamịrị nke ụmụ nwanyị dị ime.
Nchọpụta na-eme ka e guzobe hormones steroid na glands glands n'ihi mmetụta,
Ihe e ji mara hormone mmadụ (LH).
N'ime ụmụ nwanyị, ọgwụ ahụ na - eme ka mmụba na njikọ nke progesterone na estrogens mgbe a mụrụ nwa,
N'ime ndị nwoke na-arịa ọrịa, ime na-eme ka njikọ nke testosterone na-akpali.
A dịghị ahụ ụdị ọgwụgwọ megide ọrịa gonadotropin nke mmadụ na-ewebata mmeghe nke ime.
A na-edozi ihe kachasị mma nke gonadotropin choro mmadụ (hCG) na plasma ọbara n'ime ụmụ nwanyị mgbe oge 20 gasịrị,
N'ime mmadụ - mgbe 6 awachara (mgbe ogbugba, intramuscularly once).
Esemokwu dị ịrịba ama na pharmacokinetics n'ime ndị ikom na ndị inyom bụ karịsịa n'ihi ụda dị ukwuu nke abụba dị n'okpuru
Iberibe na ụmụ nwanyị na ebe. Mgbe ejiri ọgwụ na intramuscular, hCG na-etinye n'ime ọbara ahụ nke ọma.
Ọkara ndụ nke ire ere bụ 33 awa. Ihe dịka 80% nke ọgwụ a na-ebibi na anụ akụrụ. Mwepu - na mmamịrị.
• Mbelata nke ikike ịmụ nwa nke nwere ike ijikọta nkwụsị nkiopathy;
• hypogonadism hypogonadotropic;
• egbu oge n'inwe mmekọahụ na ụmụ okoro, n'ihi enweghị ọrụ nke mkpụrụ ndụ pituitary;
• cryptorchidism (ma e wezụga n'ihi ụkọ anatomical).
• na mmemme ART (enyere aka na teknụzụ ịzụlite) iji dozie mkpịsị ụkwụ maka nkwụsịtụ maka ịkọwa ọbara na-achịkwa ovarian hyperstimulation;
• ịmalite ịzụ nwa na infertility metụtara ọrịa follicular na-adịghị mma;
• Nkwado maka oge a na-ahụ maka oge ịmalite ịmalite ịmalite ọmụmụ (gụnyere n'oge a na-achịkwa hyperstimulation nke ovarian na-enye aka na nkà na ụzụ na-enye aka) na njikarị nke gonadotropin-na-ahapụ ihe ana-ekwu ọbara ọbara ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka ovulation na-akpali akpali na infertility nke ụmụ nwanyị na-akpata site na arụ ọrụ nke estrogens nke sitere na ntụgharị dịka nhazi nke WHO - enweghị oke nke ìgwè nke ovaries mbụ).
Usoro nke ngwa:
Tupu iwebata ya n'ime ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-edozi ahụ, a na-agbakwunye ihe mgbaze ahụ. Na-ejikwa nwayọ na-eduzi intramuscularly. Ihe ngwọta a kwadebere anaghị edozi nchekwa, ebe ọ bụ na echebeghị nchebe nke ịdị na-edozi nsogbu ahụ. Ngwakọta ndị a dị mma, ọgwụgwọ ahụ kwesịrị ka onye dọkịta gbanwee n'otu n'otu dabere na mmeghachi omume dị mkpa maka iwebata ire.
Nkwadebe nke uzuzu maka mgbapu ma ọ bụ ịmalite ịzụ nwa: ozugbo a gwara ya na ọgwụ 3000-10 000 IU.
Nkwado maka oge na-agụghị anya nke oge ị ga-agbaso: otu usoro nke 1000-3000 IU otu ugboro n'ụbọchị. A na-enye ngụkọta nke 2-3: oge ​​ọ bụla 1 na 9 ụbọchị mgbe oge embrayo na-amaliteghachi ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị (dịka ọmụmaatụ: mgbe ịmalite ịmụ nwa na ụbọchị 3, 6 na 9).
Mgbe ụmụ nwoke na-enweghị afọ ojuju n'ihi mmebi nke usoro ahụ, a na-ejikọta spermatogenesis na 1-2 hormone oge kwa ụbọchị ma ọ bụ 3-3 ugboro n'izu maka ọbụlagodi ọnwa 1000 iji melite ogo na ọtụtụ nke spermogram. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka monotherapy. A na-ede ọgwụ maka 2000-XNUMX IU. N'oge iwebata ero ahụ, ọ dị mkpa ka ị kwụsịtụ ịṅụ ọgwụ na testosterone, ọ bụrụ na ọ dị.
Mmebi mmekorita nke nwoke na nwa nwoke - oge kachasị njọ bụ ọgwụ 1500 IU, usoro ọgwụgwọ - ọbụlagodi ọnwa 6. A na-enye 2-3 ugboro ọgwụ n'otu izu n'izu.
Cryptorchidism: maka ụmụaka nọ n'okpuru afọ 2, a na-enye 250 IU dose nke 2 kwa ụbọchị 7 na otu ọnwa nke ọnwa 6; Site na 2 ruo afọ 6 - oge 2 kwa ụbọchị 7 maka ọnwa 500-1000 IU nke ọnwa 6; Maka ụmụaka karịa afọ 6 - oge 2 na 7 ụbọchị maka 6 ọnwa ruo 1500 ME. Ọ bụrụ na enweghi mmetụta zuru oke, a ga-emegharị usoro ọgwụgwọ ọzọ.
• mmịnye na-adịghị mma nke ovaries.
Mgbaàmà nke hyperstimulation dị nwayọọ nke ovaries: ọgbụgbọ, mgbu abdominal, afọ ọsịsa, ihe mgbu obi, mmụba nta ma ọ bụ na-abaghị uru n'ókè nke ovaries, ma ọ bụ ọdịdị ovsts ovarian. Mgbaàmà nke hyperstimulation siri ike nke ovarian: mmepe nke nnukwu ovarian ovarian (nke nwere ọdịdị nke mgbapu), uru dị arọ, ọdịdị ascites, mmepe nke nsogbu thromboembolic na hydrothorax.
Ndị ikom: mmiri na sodium na-ejide onwe ya na ahụ n'ihi ụba nke na-emepụta etrogen, mgbapụta na-emewanye ka anụ ahụ prostate, gynecomastia, erection na amụbawanye amụba n'ihi mmụba testosterone na ọbara, hypersensitivity nke nipples, obere mmụba na testicles na canal inguinal, àgwà mgbanwe, ihe ngosi nke oge mbụ nke oge ntorobịa.
N'ime ndị ikom na ndị inyom: enwere ike inwe ọgba aghara na saịtị ogwu ahụ n'ihi nsị sitere na ire ere (mgbu, mkpọchi, ọnya, itching, swelling). A na-enwekwa mmeghachi omume nke ịdị na-agwọ ọrịa (ọkụ, ọkụ ọkụ).
• Ụbụrụ Adrogen na-adabere (nke a na-enyo enyo ma ọ bụ nke a na-enwe obi ara na ụmụ nwoke, prostate carcinoma);
• ọrịa ọrịa endocrine na-adịghị agwọta (arụghị ọrụ nke adrenal, hypothyroidism, hyperprolactinemia);
• Enweghi mmetọ nke ndị inyom na-ejikọta na igbochi nke tublopin tubes;
• cancer cancer ovarian,
• mmeghachi omume na-akpata nfụkasị na ọgwụ ọgwụgwọ hormonal ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị dị na ero ahụ.
Achọghị ịchọta ọgwụ n'ime afọ ime, ka edepụtara ka ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ịmalite ịmalite ịmalite oge. Otú ọ dị, ọ dịghị atụ aro ịnye ọgwụ maka ndị nne na-azụ nwa.
A na-ahụkarị gonadotropin ụbụrụ ụmụ mmadụ na-egbu egbu nke ukwuu. A kọwaghị ihe ịrịba ama nke nnukwu nnyefere na nlekọta nne na nna. N'ime ụmụ nwanyị megide nzụlite nke njegharị, ọbara hyperstimulation nke ovarian nwere ike ime.
Ngwuputa nke na-edozi ihe maka nkwadebe ihe ngwọta ọgwụ na ntinye nke 1500 IU; 5000 IU. Ihe ntinye gụnyere ihe mgbaze. Na igbe igbe, 3 ampoules na-ere ure na ngwugwu ngwugwu.
A ghaghị ịchekwa ọrịa n'ime refrjiraeto na ọnọdụ ọchịchịrị n'oge okpomọkụ nke 2-15 Celsius C karịa karịa 3 afọ. Hụ ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ a kapịrị ọnụ n'oge njem.
Ngwakọta nke rere ure.
Ngwá ọrụ ọrụ: chodionic gonadotropin.
Ihe na-enye aka: mannitol, sodium dihydrophosphate anhydrous, sodium hydrophosphate anhydrous, sodium carboxymethylcellulose.
Hormones, analogs na ọgwụ nje
Mmekọahụ nke mmekọahụ
Ọgwụ na-adabere na ụmụ nwanyị na-ahụ maka hormones na ihe analogues ha
Ihe na-arụ ọrụ:
E nwere ohere dị ukwuu nke ime afọ ime na ịmalite ịzụ nwa site na gonadotropin choro mmadụ. N'ihe banyere aka na nkà na ụzụ mmepụta, enwere ike inwe ọpụpụ na-aba ụba. Ọ bụrụ na e nwere ihe ndị na-egosi mmebi nke ịme ọkpụkpụ - na - eme ka ohere nke ectopic (ectopic) dị ime. N'ọnọdụ ikpeazụ, mgbe mmalite nke ịtụrụ ime, ọnọdụ nke ịzụ nwa nke nwa ebu n'afọ ga-ekwenye site na nnyocha nke ultrasound nke akpanwa. Tupu ịdebe ọgwụ ahụ, njedebe nke endocrinopathies na-ejighị achịkwa nke ndị na-abụghị ndị sitere na ya (nkwụsị nke ụbụrụ thyroid, pituitary glands ma ọ bụ gọọmenti adrenal) ga-ewepụ.
Nchọpụta n'ime ụmụ nwanyị na-amụtaghị nwa na-adabere na ụbụrụ na-adịghị mma ma ọ bụ na-eme ka ahụvulation nwere ike iduga hyperstimulation na-achọghị nwanyị na-achọghị. N'ọnọdụ ndị a, tupu ma n'oge ọgwụgwọ (mgbe ọ bụla), nyochaa ultrasound dị mkpa iji nyochaa mmepe nke ọkpụkpụ ahụ. A na-atụ aro ka ị chọpụta oge niile nke estradiol na ọbara ọbara. Ọganihu ngwa ngwa na estradiol (2-n'ogige maka 2-3 ụbọchị) nwere ike igosi mmepe nke ọnụ ọgụgụ buru ibu. Achọpụta na hyperstimulation a na-atụghị anya na ovaries nwere ike ikwenye site na ultrasound nyochaa ovaries. Ọ bụrụ na ị kwenye na nchoputa ahụ, ọ dị mkpa ka ị kwụsị ngwa ngwa iwebata ego nke nwere hormone na-akpali akpali, ebe ọ bụ na enwere egwu maka mmepe nke ọrịa ovstimulation nke ovarian na ịmalite ọtụtụ ovulation. E kwesịrị ilekọta nlebara anya iji mesoo ndị ọrịa na ovaries multifollicular.
Mmeghe nke gonadotropin nke mmadụ na-eme ka mmụba nke androgens dị elu, ya mere enwere ike ịda mbà n'obi n'ozuzu ma ọ bụ nlọghachi na nkwarụ na-arịa ọrịa siri ike ma ọ bụ nke na-aga n'ihu, migraine (gụnyere migraine na anamnesis), ọbara mgbali elu, enwekwaghị ike ịrụ ọrụ, epilepsy . Maka ndị dị otú a, a na-eji nlezianya eme ọgwụ ahụ n'okpuru nlekọta ahụ ike.
Iji gbochie inwe mmekọahụ ma ọ bụ epiphyseal na-eto eto n'oge ụmụ okorobịa, ọ dị mkpa iji nlezianya dọọ ha aka na oge a. N'okwu a, iwebata rotting kwesịrị ịrụ n'okpuru nchịkwa nke steeti usoro ahụ.
Ekwentị: + 66 61 686 66 55
HGH Thailand - Zụrụ ibu hormone na Thailand
© 2018, Edebere ikikere nile site nwebisiinka iwu HGHThailand.com | amụma nzuzo | Usoro nke ọrụ | nkwụghachi iwu | anyị na-ekwe nkwa | Lee ebe Akwadoro site na: FitHamster | Ndị mmekọ: HGH Thai